Xiaomi Mi Band 4: wuxuu ka dillaacay muuqaalkeedii ugu horreeyay ee rasmi ah | Androidsis
Xiaomi Mi Band 4 horeyba waxay u leedahay taariikh soo bandhigid ah, sida la shaaciyey maalmo ka hor. Waxay noqon doontaa Juun 11 marka aan aadeyno inaan ogaanno jiilka afraad ee jijin firfircoon ee astaanta Shiinaha. Si tartiib tartiib ah, markay taariikhdan u soo dhowaatay, waxaan baraneynaa faahfaahin ku saabsan jijin, taas oo waxaan horey u haynay xog nagu filan ilaa hada. Hadda, waa maxay sawirkii ugu horreeyay ee rasmi ah oo la shaaciyay, kaas oo xaqiijinaya dhowr faahfaahin.
Mid ka mid ah dhinacyada isbeddelaya Xiaomi Mi Band 4 waa shaashadda, taas oo kiiskan uu noqon lahaa midab. Waad ku mahadsan tahay sawirkan cusub waxaan arki karnaa inuu ugu dambeyn sidan noqon doono, sidaa darteed waxaan horeyba u ogaanay mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee ka dhigi doona jiilkan cusub mid xiiso leh.
Waxaan sidoo kale arki karnaa in nooca Shiinaha uu naga tagayo naqshad midabkeedu yahay muuqaal muhiim ah. Waxaa jira dhowr nooc, oo leh xargaha midabada kale kiiskan. Sidaas darteed qof kastaa wuxuu awood u yeelan doonaa inuu doorto nooca Xiaomi Mi Band 4 ee ay aadka u jecel yihiin. Naqshad farxad leh, oo leh muuqaal la hubo inay dad badani jeclaan doonaan.
Jiilkan cusub, waxaa loo isticmaali doonaa guddi OLED ah, oo ka weyn xilliyadii hore. Waxay sidoo kale ku lug leedahay soo bandhigida Bluetooth 5.0 dhexdeeda, marka lagu daro, warar xan ah ayaa sheegaya waxaa jiri lahaa nooc ka mid ah kaas oo lagu bilaabayo NFC. In kasta oo tani ay tahay wax aan weli la xaqiijin.
Nasiib wanaag Waxay noqon doontaa 11-ka Juun markaan ka tagno shaki waxa ku saabsan waxa Xiaomi Mi Band 4 naga tagayo. Waxaa sidoo kale la sheegay in sumadda Shiinaha aysan soo bandhigi doonin oo kaliya jiilkeeda cusub ee jijin waxqabad. Waxaan sidoo kale filan karnaa in smartwatch-kaaga cusub lasoo bandhigo.
Ma doonaysaa Xiaomi Amazfit Verge 2 saacadda ayaa la imaan doonta Xiaomi Mi Band 4 haddii ay dhacdo. Marka sumadda Shiinaha waxay cusbooneysiineysaa noocyadeeda kala duwan ee la gashado. Wax muhiim ah maxaa yeelay iyagu waa mid ka mid ah noocyada ugu iibinta badan gudaha qaybtan suuqa maanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Shaandheeyay sawirka rasmiga ah ee ugu horreeya ee Xiaomi Mi Band 4
Stadia waxaa laga heli doonaa Pixel 3, 3 XL, 3a iyo 3a XL markii la bilaabay